January 2021 - Channel Lover
January 8, 2021 by Channel Lover
ကြောက်ဖို့ကောင်းလာတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းခလေးတွေ အယုံမလွယ်ကြပါနဲ့ ဗန်းမောက်မြို့နယ် လုံးကင်း ရွှေကျောင်းအုပ်စု တုံးမွန်းရွာနေ မရှင်နှင်းဖြူ (ခ) ချစ်နှင်းဖြူအား ဗန်းမောက်မြို့နယ် စီးမော်အုပ်စု စီးမော်မြကျွန်းသာရွာနေ မပြား(ခ) မခင်ဖြိုးသူ မှသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်သွားပြီး ယနေ့ ၈ ၁ ၂၀၂၁ ရက်နေ့ မနက်ကမဲဇာဘူတာမှ ၄၁ အဆန် ရထားဖြင့်လိုက်သွားကြောင်း သိရပါသည်။ တွေ့ရှိပါကပုံပါ ဖုန်းနံပါတ်များအားဆက်သွယ်ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် #ဆွဲထုတ်_နဘား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဗန်းမောက်မြို့နယ် စီးမော် သောင်ကြီးကျေးရွာနေ အဖ ဦးပြုံးမောင် အမိ ဒေါ်ဖြူတို့၏ သမီး မချစ်နှင်းဖြူ(အသက်၂၁)သည် အိမ်မှထွက်ခွာသွားသည်မှာ ၄ ၅ ရက်ခန့်ရှိနေပါပြီ။ မချစ်နှင်းဖြူအား မပြာ(ခ)မခင်ဖြိုးသူ (နေရပ်လိပ်စာအတည်တကျမရှိ)ဆိုသူအမျိုးသမီးက လိမ်လည်လှည်ဖျား ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုထင်ရကြောင်း မချစ်နှင်းဖြူ၏ မိခင်မှပြောပါသည်။ မချစ်နှင်းဖြူ၊မခင်ဖြိုးသူနှင့်တစ်နှစ်ကျော်ကလေးငယ်တစ်ယောက်(မခင်ဖြိုးသူကအဝတ်နှင့်ပိုးလျှက်)သုံးဦးမှာလည့်ပတ်ရှောင်ပြေးနေပါသည်။ မချစ်နှင်းဖြူ၏ မိဘဆွေမျိုးများကလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါသည်။ ၄င်တိုသုံယောက်အားတွေရှိပါက … Read more
လေဖြတ်လူနာ အတွက် အုန်းသီး နှင့် ထနှောင်းခေါက်
“လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရ သူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်းတစ်လက်” လေဖြတ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာခံစားရပါသည် ပြုစုရသော မိသားစုများမှာလဲ အင်းမတန်မှ ဒုက္ခရောက်ပါသည် သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆေးဖော်နည်းလေးမျှဝေ လိုက်ပါသည် ဆေးဖော်ရန်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ၁ အုန်းသီးရင့်ရင့်တစ်လုံး ၂ ထနှောင်းခေါက် နှင့် ချက်သော တောအရက် ဦးရည် ၃ ဆေးဖော်နည်းမှာ အုန်းသီး၏ နတ်သမီးပေါက် အနားကို ဓားနှင့် ရှက်၍ နတ်သမီးပေါက်ကို ဖောက်ပြီး အုန်းရည်များ ထုတ်ပြစ်ရပါမည် ၎င်းနောက် အရက်ဦးရည်ကို အုန်းသီးထဲတွင် အပြည့် ထည့်၍ အပေါက်ကို သင့်တော်ရာဖြင့် လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ ပိတ်ပြီးသောအုန်းသီးကို မြေကြီးကို တောင်ဝက်လောက်တူး၍ (၇)ရက် တိတိ မြုတ်ပါ (၇)ရက်ပြည့်လျှင် ပြန်ဖော်၍ အုန်းသီးထဲမှ အရက်များပြန်ထုတ်ပြီး ပုလင်းထဲပြန်ထည့်၍ … Read more
အူအတက်ပေါက်လျှင် ချက်ချင်းသိနိုင်သည့် လက္ခဏာများ
အူအတက်ပေါက်သည့်အခါ ပြသည့်လက္ခဏာများ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကြုံဖူးကြပါတယ်။ ဗိုက်အောင့်ခြင်း. ဝမ်းချုပ်ခြင်း. အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း တို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ အူအတက်နဲ့ ပတ်သက်တာကတော့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိပါဘူး လူတိုင်း အူအတက်ပေါက်တာနဲ့ ကြုံဘူးတာမရှိပါဘူး ကြုံခဲ့ရင်လည်း ဆေးရုံ အချိန်မီရောက် အမြန်ခွဲထုတ် ရပါမယ် ။ အူအတက်ပေါက်တဲ့ လက္ခဏာ များမှာ ၁ – အစာအိမ်က ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ပါတယ်။ ( ဒီလိုခံစားမူမျိုး တခါမှ မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး) ၂ – ဝမ်းဗိုက် ကြွက်သားအောက်ဖက် ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ဆိုးဝါးစွာအောင့်ပါတယ်။ ၃ – မူးမော်ပြီး ပျို့အန်ပါတယ်။ ၄ – အစာ စားချင်စိတ်လုံးဝမရှိပါ။ ၅ – အချို့လူတွေမှာ အူအတက်ဟာ တင်ပဆုံရိုးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဆီးအိတ်နဲ့ … Read more
ဆေးနည်းလေးမေတ္တာဖြင့််​ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်​ “ရင်သား​ကင်ဆာအတွက်ဆေးနည်းအမှန်” ဒီမနက်လေးတင်ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ရင်သား​ကင်ဆာဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားသူထံမှဖြစ်ပါတယ် “အညာကုက္ကိုရွက်နုများကိုရေစင်စင်ဆေးပြီးအကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးစာရအောင် သတ္တုရည်ထောင်းသောက်ကြောင်းနဲ့ — ၁ ။နံနက်၉နာရီတစ်ကြိမ် ၂ ။ နေ့လည်၁နာရီတစ်ကြိမ် ၃ ။ ညနေ၅နာရီတစ်ကြိမ် တစ်နေ့သုံးကြိမ်ထောင်းသောက်ခဲ့ကြောင်း လိမ်းဆေးအနေနဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာအလေ့ကျပေါက်သည့်အရွက်ဖါးဖါးနှင့်”ကဒူးပင်”ကိုထောင်းပြီးအနာပေါ်အုံပါကြောင်း ခြောက်တာနဲ့အသစ်ထောင်းအုံပါကြောင်းသုံးလ ကျော်ခန့်သောက်ရလိမ်းရကြောင်းနဲ့ယခုရောဂါပျောက်ကင်းချမ်းသာနေပါကြောင်း — ယခုအသက်၆၉နှစ်ရှိပြီးဆေးနည်းလှူရတဲ့ ကုသိုလ်ကိုအမျှပေးဝေပါကြောင်းပြောလာ ပါတယ်။ သာဓုလည်းခေါ်ဆေးနည်းလည်းယူကြပါ ဝေဒနာရှင်ရှိရင်လည်းနည်းပေးလမ်းညွှန်ကုသပေးရင်းကုသိုလ်အမှုပြုနိုင်ကြပါစေ။ မှတ်ချက် ရန်ကုန်တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသော”ကုလားကုက္ကိုမဟုတ်ပါ။ အညာကုက္ကိုခေါ်မြန်မာကုက္ကိုအသီးပုံကုလားကုက္ကိုကအသီးမှာအနက်ရောင်ဖြစ်၏။ “ပုံမှာအညာကုက္ကိုအသီးပုံဖြစ်ပါသည်။ ကုလားကုက္ကိုအသီးမှာအနက်ရောင်ဖြစ်၍ခွဲခြားနိုင်ရန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပင်မှာဆင်တူ၍ဓါတ်ပုံဖြင့်မခွဲခြားနိုင်ပါ၍အသီးဖြင့်ခွဲခြားသိကြပါစေ။ Khin Mg Kyi Unicode ဆေးနညျးလေးမတ်ေတာဖွငျ့​ပွနျလညျမြှဝပေါတယျ​ “ရငျသား​ကငျဆာအတှကျဆေးနညျးအမှနျ” ဒီမနကျလေးတငျဖုနျးဝငျလာပါတယျ။ရငျသား​ကငျဆာဝဒေနာပြောကျကငျးသှားသူထံမှဖွဈပါတယျ “အညာကုက်ကိုရှကျနုမြားကိုရစေငျစငျဆေးပွီးအကွမျးပနျးကနျတဈလုံးစာရအောငျ သတ်တုရညျထောငျးသောကျကွောငျးနဲ့ — ၁ ။နံနကျ၉နာရီတဈကွိမျ ၂ ။ နလေ့ညျ၁နာရီတဈကွိမျ ၃ ။ ညနေ၅နာရီတဈကွိမျ တဈနသေုံ့းကွိမျထောငျးသောကျခဲ့ကွောငျး လိမျးဆေးအနနေဲ့လယျကှငျးထဲမှာအလကေ့ပြေါကျသညျ့အရှကျဖါးဖါးနှငျ့”ကဒူးပငျ”ကိုထောငျးပွီးအနာပျေါအုံပါကွောငျး ခွောကျတာနဲ့အသဈထောငျးအုံပါကွောငျးသုံးလ ကြျောခနျ့သောကျရလိမျးရကွောငျးနဲ့ယခုရောဂါပြောကျကငျးခမျြးသာနပေါကွောငျး — ယခုအသကျ၆၉နှဈရှိပွီးဆေးနညျးလှူရတဲ့ ကုသိုလျကိုအမြှပေးဝပေါကွောငျးပွောလာ … Read more
သငျမသိသေးတဲ့ မတျတပျရပျပွီးရမေသောကျသငျ့သညျ့အကွောငျးအရငျး ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့အတှကျ တဈနကေို့ ရေ(၈)ခှကျသောကျတာက ပွဿနာမဟုတျပါဘူး ပွဿနာက ရသေောကျတဲ့အခါ ဘယျလိုအနအေထားမြိုးနဲ့ သောကျဖွဈနလေဲဆိုတာပါပဲ လူတျောတျောမြားမြားဟာ ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ ပတျသတျပွီး သိပျပွီး မသိရှိကွသလို သတိလညျး မထားမိတတျကွပါဘူး သိပ်ပံနညျးကြ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ရသေောကျတဲ့အခါမှာ မတျတပျရပျအနအေထားနဲ့ မသောကျသငျ့ဘူးဆိုတာကို အံ့အားသငျ့စှာ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ 💧၁။ အဆဈရောငျခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျ မတျတပျရပျအနအေထားဖွငျ့ ရသေောကျတဲ့အလအေ့ထဟာ ကွာလာတဲ့အခါမှာ အဆဈရောငျတဲ့ ဝဒေနာကို ခံစားလာရနိုငျပါတယျ။ မတျတပျရပျပွီး ရသေောကျခွငျးက ခန်ဓာကိုယျအတှငျးရှိ အဆဈအဆကျမြားဆီသို့ အရညျဓာတျစီးဆငျးမှုကို အနှောကျအယှကျဖွဈရာမှတဈဆငျ့ အဆဈရောငျရောဂါအတှကျ အစလမျးကွောငျးကိုဖွဈစပေါတယျ။ 💧၂။ အစာခွစေနဈကို ထိခိုကျစေ မတျတပျရပျပွီး ရသေောကျခွငျးကွောငျ့ ရတှေဟော အစာအိမျနံရံတှမှော ပိုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ စီးဆငျးစပေါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ စီးဆငျးမှုဟာ အခြိနျကွာလာတဲ့အခါမှာ … Read more
အလုပျသမား ၃၀ ကြျောလုံးကို သိနျး ၃၀၀ ကြျော ပေးဝတေဲ့ အလုပျရှငျ(ရုပျသံ)
ဒီနေ့ တပည့်တွေကိုမုန့်ဖိုး တယောက် ၁၀ သိန်းပေးလိုက်ပါပီ.အားလုံးအတွက် စုစုပေါင်း သိန်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်ပါ… ကိုယ်လည်းအဆင်ပြေလို့ ချမ်းသာလို့တော့ မဟုက်ပါဘူး.ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်တော့လိုအပ်တာတွေအတွက်ထောက်ပန့်မူ့တခု ဖြစ်ကြပါစေ..ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုပေးရတဲ့ဘဝကို ကျေနပ်ပါတယ် ယူသောလက်မဖြစ်ချင် ပေးသောလက်ပဲ ဖြစ်ပါရစေပေါ့. လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်က ကိုယ်ကတလမှ ၁၂၀၀၀၀ ပဲရခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကနေဒီလိုနေရာလေးတခုဖြစ်လာဖို့တပည့်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ရဲဖော်ရဲဘက်တွေပါပဲ.. ဝန်ထမ်းဘဝနေ လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းဘဝရဲ့အခက်ကိုလဲသိတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလဲ သိပါတယ်.ဒီနှစ်ခုကြားဘဝထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ဖို့အတွက် အမြဲကြိုးစားနေတယ်နောင်နှစ်တွေမှာလဲ အမြဲပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်..ဘယ်အရာမှတော့ ကြိုပြောလို့မရတဲ့အတွက်မဆုက်မနစ်သော ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယ ကြိုးစားကြပါစို့..အားလုံးပျော်ရွှင်ပါကြပါစေ တပည့်တို့…ဝန်ထမ်း ၃၀ ကျော်ရဲ့နောက်ကမှီခိုနေတဲ့ မိသားစု ၃၀ ကျော်လည်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ.. zawgyi code ဒီနေ့ တပညျ့တှကေိုမုနျ့ဖိုး တယောကျ ၁၀ သိနျးပေးလိုကျပါပီ.အားလုံးအတှကျ စုစုပေါငျး သိနျး … Read more
အညတရ မီးအိမ်ရှုင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခေါင်လန်ဖူးတောင်ပေါ်မြေမှာ ကြွေလွင့်အသက်ပေးသွားရတဲ့မီးအိမ်ရှင်ဆရာမလေးဒေါ်စန္ဒာမိုး တာဝန်ကျရာကျေးရွာမှ အစိုးရရုံးစိုက်တဲ့ခေါင်လန်ဖူးမြို့ပေါ်သို့ လစာထုတ်ရန်တောင်ပေါ်ခြေလျင်လမ်းခရီးကို ၃ ရက်ကြာလမ်းလျောက်လာရတဲ့ အလယ်တန်းပြဆရာမလေး ဒေါ်စန္ဒာမိုးဟာ နှလုံးအားနည်းရောဂါရှိတာကြောင့် 2020 စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့​တောင်ပေါ်လမ်းခရီးတစ်ဝက်မှာ အမောဆို့ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ် ခေါင်လန်ဖူးမြို့ရဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲခက်ခဲကြမိးတမ်းလွန်းတဲ့ ဒေသဒဏ်ကို ရောဂါအခံရှိတဲ့ဆရာမလေးကမခံနိုင်ခဲ့ဘဲတောင်ပေါ်မြေကို မြေ ပြန့်ကနေ လာရောက်အလင်းပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အမောဖောက်သေဆုံးခဲ့ရတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ကွယ်လွန်ချိန်မှာပင်မိသားစုနဲ့ မတွေ့လိုက်ရဘဲခေါင်လန်းဖူးဒေသခံတွေက တောင်ပေါ်မှာဘဲ မြေမြုပ်သဂြိုလ်ပေးခဲ့ရပါတယ် ဆရာမသေဆူံးတဲ့သတင်းက ဆရာ ဆရာမလောကနဲ့ မြေပြန့်ကိုပါရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ် တောင်ပေါ်မြေကိုအလင်းပေးနေကြတဲ့ အညတရသူရဲကောင်းအာဇာနည် မီးအိမ်ရှင်လေးများရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသတိရအသိအမှတ်ပြုလျက်ပါ တောင်ပေါ်မြေဟာ လှပလွန်းပေမဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းပါတယ် လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရန် မလွယ်ကူပါ တချို့က မီးအိမ်ငယ်တွေကို အပြစ်ပြောကြတယ် တချို့က ကဲ့ရဲ့ကြတယ် တချို့က ဝေဖန်ကြတယ် တောင်ပေါ်မြေကို မိမိတို့မှာရှိတဲ့အလင်းရောင်ကို တက်နိူင်သမျှပေးစွမ်းနေတဲ့ မီးအိမ်ငယ်လေးများကို မကူညီရင်နေပါ မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့မချီကျူးရင်နေပါ … Read more
“ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်က အရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ”
“ဆွမ်းခံကြွလာရင်း ဆိုင်က အရုပ်လေးတွေကို ငေးကြည့်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ” ဒီနေ့ ပျော်သည်မိမိဆိုင်ရှေ့မှာချိတ်ထားတဲ့အရုပ်လေးတွေကိုရပ်ကြည့်နေတဲ့ကိုရင်လေးကို …ကိုရင်လေးဘုရားဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းပြည့်စုံပါလားဘုရား လို့ မေးလိုက်တော့ပြည့်စုံပါတယ် ဒကာမကြီး။ကိုရင်လေးစာဝါလိုက်နေပါလားဘုရားဆို တော့၁ တန်းပါ တဲ့ .ကိုရင်ဘုရားအရုပ်လိုချင်လို့လားဘုရားလို့မေးလိုက်တော့မိမိကို ပြုံးစိစိနဲ့ကြည့်ပြီးခေါင်းလေးငြိမ့်ပြတယ်။ကိုရင်လေးလိုချင်တဲ့ကားအရုပ်လေးတွေကိုလှူပေးခဲ့တယ်။မိမိလှူပေးတာတွေ့တော့ဘေးကလူတစ်ချို့က … ကိုရင်ဆိုတာစာသင်ရမှာလေ ကစားရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ .အလွန်ဆုံးရှိ၆ – ၇ နှစ် အရွယ်မိဘ နဲ့ ဝေးပြီးခုလို အလွန်အေးတဲ့မန္တလေး ဆောင်းနံနက်ခင်း၆ – ၇ နာရီမိမိတို့ အများစုကုတင်ပေါ် စောင်ခြုံလို့ကွေးကောင်းတုန်း အချိန် …အနွေးထည် ဦးထုပ်မပါခြေဗလာ နှင့်ဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ဘုရားသားတော်ကိုရင်လေးနေရာဝင်ကြည့်ပါ🙏ကလေးဘဝအရွယ်မှာသူလည်း အဖေ့အိမ်မှာ ပျော်ချင်မှာပဲအမေ့ရင်ခွင်မှာ နွေးထွေးမှုတွေလိုချင်မိမှာပဲလေ …မောင်နှမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆော့ကစားချင်မိမှာပေါ့ …ကိုရင်လေးကိုအရုပ်ပေးလှူခဲ့တာအပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့လား?သူတို့လေးတွေစာဝါလိုက်ချိန်လိုက်ကစားချိန်ကစားနားချိန်နားပြီးသာသနာတော်မှာပျော်မှမြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှာမဟုတ်လား?ကိုရင်လေးတွေဆိုတာအနာဂါတ်ရဲ့စာချဆရာတော်လောင်းတရားဟောဆရာတော်လောင်းအရိယာလောင်း တွေလို့ ပဲမြင်မိပါတယ် 🙏သူတို့လေးတွေသာသနာတော်မှာပျော်ကြပါစေ 🙏သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ 🙏 ကိုရင်လေးကိုနောက်နောင်ဆွမ်းဟင်းမပြည့်စုံရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်ဆိုင်ကိုကြွခဲ့ပါဘုရားဆိုတော့ကိုရင်လေး ပြုံးပြခဲ့တဲ့ … Read more